माघ ३ गते साेमबारकाे राशिफल सोमबार धेरै राशिका लागि शुभ रहनेछ र काममा लाभको सम्भावना छ। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको बोलीको प्रभाव पर्नेछ । आफ्नो दैनिक राशिफल जान्नुहोस्। मेष: सोमबार भाग्यले साथ दिनेछ। काममा तपाईको प्रदर्शन राम्रो रहनेछ। तपाईमा बोल्ने कला छ जुन तपाईलाई कुनै पनि क्षेत्रमा सफलताको शिखरमा पुर्‍याउन सहयोगी साबित हुनेछ । सोमबार भाग्यले […]
काठमाडाैं । प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन सोमबार प्रदेश सभामा मतदान हुने भएको छ। आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको राजधानी तथा नामकरण सम्बन्धी अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ। विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समितिका सदस्य परमेश्वर साहले दलहरूबीच व्यापक छलफल गर्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए। साहले भने, “सबैले आ-आफ्नो प्रस्तावमा अडिग रहेको […]
January 16, 2022 January 16, 2022 N88LeaveaComment on विवाहमा ५० जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाइने
काठमाडौं । सरकारले कोभिड संक्रमण बढेसँगै केही क्षेत्रमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धार्मिक कार्य र विवाहमा ५० जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाइने, सबै प्रकारका जुलुस र भेला हुने गतिविधि माघ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको हो । आइतबार संचारमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठक, […]
January 16, 2022 N88LeaveaComment on च्युइङगम चपाउने गर्नुहुन्छ, एक पटक याे पढ्नुस् !
काठमाडाैं । कामको तनाव कम गर्ने, अनुहारको व्यायाम गर्ने, एकरसता तोड्ने, भोक कम गर्ने जस्ता धेरै कारणहरूले धेरै मानिसहरू च्युइङगम चपाउने गर्छन्। अध्ययनले यो पनि प्रमाणित गरेको छ कि चुइङगमका धेरै फाइदाहरु छन् । तर यसबाट हुने धेरै क्षतिको बारेमा कमैलाई थाहा छ । अर्कोतर्फ, दैनिक च्युइङगम चपाउने अधिकांश मानिसलाई यसलाई खाने सही तरिकाबारे पनि […]
प्रेम आलेले योगेशलाई ठेगान नलगाइ नछाेड्ने भन्छन्, ‘आफ्नै पार्टीको नेता भए पनि छाड्दिनँ’
January 16, 2022 N88LeaveaComment on प्रेम आलेले योगेशलाई ठेगान नलगाइ नछाेड्ने भन्छन्, ‘आफ्नै पार्टीको नेता भए पनि छाड्दिनँ’
काठमाडाैं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नका लागि आफूले कुनै काम नगरेको बताएका छन्। भारत सरकारद्वारा निर्मित पशुपति धर्मशालाको अवस्था बुझ्न तिलगंगा पुगेका उनले पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईबारे सोधिएको प्रश्नमा यस्तो भनेका हुन्। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयसहितका सरकारी संरचना भाडामा दिएको कुरामा आलेमाथि पूर्व मन्त्री भट्टराईसँग प्रतिशोध साँध्न खोजेको आरोप […]
जसको हातमा यी रेखा हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्ति हुन्छन् भाग्यमानी
January 16, 2022 N88LeaveaComment on जसको हातमा यी रेखा हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्ति हुन्छन् भाग्यमानी
काठमाडाैं । सूर्य पर्वत र हत्केलाको सूर्य रेखाले भविष्यको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ। हस्तरेखा शास्त्रका अनुसार सूर्यको आरोहण जति धेरै हुन्छ, त्यति नै धेरै लाभ हुनेछ । हत्केलाको सूर्य पर्वतले व्यापार र पैसाको बारेमा पनि देखाउँछ। जान्नुहोस् हत्केलाको सूर्य पर्वतले भविष्यको बारेमा के बताउँछ। हस्तरेखाशास्त्रका अनुसार हत्केलाको सूर्य पर्वत दूषित भएमा व्यक्ति अपराधिक प्रवृत्तिको हुन्छ […]
फेरि फुट्दै जसपा, बाबुराम र उपेन्द्र तनावमा !
January 16, 2022 January 16, 2022 N88LeaveaComment on फेरि फुट्दै जसपा, बाबुराम र उपेन्द्र तनावमा !
काठमाडौं । उपेन्द्र यादव, वावुराम भट्टराई र अशोक राई विचका विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटको चरणमा पुगेको चर्चा सुरु भएको छ। अध्यक्ष यादवले एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि पार्टीमा तिव्र विवाद छ। एमाले विभाजनका लागि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेशमा टेकेर महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो लगायतका नेताले अर्को पार्टी गठन गरेपछि पार्टीमा अध्यक्षको […]